အကောင်းဆုံး Web စာမျက်နှာအကျယ်ကဘာလဲ။ | Martech Zone
အကောင်းဆုံး Web စာမျက်နှာအကျယ်ကဘာလဲ?
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 8, 2009 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 20, 2014 Douglas Karr
ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာအကျယ်ကိုအကောင်းဆုံးအကျယ်သို့သတ်မှတ်ခြင်းသည်လိုအပ်သောစကားဝိုင်းဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏ဒီဇိုင်းအကျယ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ ငါစာမျက်နှာအကျယ် 1048 pixels ကိုထွက်တွန်း။ သင့်၏အချို့သည်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသဘောမတူနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အခင်းအကျင်းအကျယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကြောင်းပြချက်နှင့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကိုမျှဝေလိုသည်။
1048 pixel သော်လည်း, ကျပန်းအရေအတွက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
Youtube တွင်ပိုမိုကြီးမားသော embed size များကိုယခုပေးထားသည်။ Youtube ဗီဒီယိုစာမျက်နှာ၏ဘေးဘားရှိဂီယာငယ်လေးကိုသင်နှိပ်လိုက်ပါကအရွယ်အစားနှင့်အခင်းအကျင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဗီဒီယိုများသည် Youtube တွင်နေရာအနှံ့အပြားသို့ရောက်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းဗီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ထဲသို့ထည့်သွင်း။ အသေးစိတ်စာမျက်နှာများကိုပြသခဲ့သည် (စာမျက်နှာအကျယ်တစ်ခုလုံးကိုမသုံးဘဲ)
ပုံမှန်ကြော်ငြာသည် ၁၂၅၊ ၂၅၀ နှင့် ၃၀၀ pixel width ရှိသည်။ ကြော်ငြာအခွန်အခဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် 125 pixel ပိုများလာသည်ဟုထင်ရပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ sidebar ထဲသို့သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထည့်သွင်းချင်သည်။
နောက်ပြီးစာမျက်နှာရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်အခြမ်းမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘေးဘားတန်းတွေအကုန်လုံးကျန်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မှော်အရေအတွက်က ၁၀၄၈ ပစ်ဇယ်ပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်! အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ visitors ည့်သည်အများစုသည်အနိမ့်ဆုံး resolution ဖန်သားပြင်များသာအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာကိုချဲ့ရန်ဒုတိယအကြိမ်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ Analytics package (Google တွင် Vis ည့်သည်များ၊ Browser စွမ်းဆောင်ရည်များ> Screen Resolutions) မှမျက်နှာပြင် resolution ကိုထုတ်ယူပြီးနောက်ရလဒ် Excel ဇယားကွက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး resolution field မှအကျယ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
Google က resolution ကို 1600 × 1200 အဖြစ်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်သင်က "x" ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှအရာအားလုံးကိုယူပြီး၊ ကိန်းဂဏန်းရလဒ်တစ်ခုဖြစ်စေရန် ၁ ကိုမြှောက်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်အပေါ်ဆင်းနိုင်အောင်စီစဉ်နိုင်ပြီး၊ သင်ကြည့်နေသောဒီဇိုင်းအကျယ်ထက် ပို၍ ကြီးသည် (သို့) လျော့နည်းသည်။
= လက်ဝဲ (A2, FIND ("x", A2,1) -1) * 1
ကျွန်ုပ်သည် resolution သေးငယ်သောစာဖတ်သူများ၏ ၂၂% ကိုကျွန်ုပ်စွန့်ပစ်ခဲ့သလား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ! သင်၏ content ဘယ်ဘက်နှင့် sidebar ညာဘက်ရှိ layout တစ်ခု၏ကောင်းမွန်သောအချက်မှာသင်၏ content သည် browsers အများစု၏အကျယ်အ ၀ န်းအတွင်း၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများ၏ ၉၉% သည် ၆၄၀ ပစ်ဇယ်အကျယ်ထက်ကြီးသောအပြေးရှိသည်။ သူတို့ကိုငါ sidebar မှာလုံးဝမလွတ်စေချင်ဘူး၊
Tags: အခွန်စာရေးသူခရစ်ဗန်အအေးခေါ်ဆိုမှုအီးမေးလ်တုံ့ပြန်သူkylelacylinkedin ကြော်ငြာများစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအရောင်း crmရောင်းအားအလားအလာရှိသည်အရောင်းရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လူမှုရေးကြော်ငြာများ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းအပေါ် ROI ကဘာလဲ?
8:2009 pm မှာဇွန် 7, 20
ငါ hybrid အပြင်အဆင်နှင့် CSS container အကျယ် ၁၀၀% အကျယ်ရှိသည်။ သင်သည် sidebar အတွက်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းထားရှိပါက header, footer နှင့်အဓိကအကြောင်းအရာနေရာများသည်ကျန်ရှိနေသေးသောအကျယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ညှိပါလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူရဲ့မော်နီတာ resolution ကိုကြည့်ပါလူတိုင်း၏ browser window ၏ 100% ကိုဖြည့်သည်။ ထိုအခါသင်သည် pixel များကိုရေတွက်။ မရ၊ မော်နီတာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုစောင့်ကြည့်စရာမလိုတော့ပေ။
ဇွန် 8, 2009 မှာ 12: 22 pm တွင်
ငါ Hybrid အပြင်အဆင်တွေကြိုက်တယ်ဘော့။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကတော့တခါတလေတကယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းမကစားနိုင်ဘူး။ ငါပျင်းရိကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော် max နှင့် min သည်ငါ၏ site တွင် 640px ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သိရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ငါရေးသားချက်များရေးသားတဲ့အခါငါဆန့်ခက်သည်။
ငါခန့်မှန်းရုံပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကို!
ဇွန် 8, 2009 မှာ 12: 17 pm တွင်
အမှန်ကတော့မင်းရဲ့နိဂုံးချုပ်ကိုငါသဘောတူတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ fixed width set-up ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် 960 pixels အထိကန့်သတ်လိုက်တယ်။
တစ်ခုမှာဒေါင်လိုက် scroll bar များနှင့်အပိုဆောင်းအကျယ်ဖွင့်သောအခြား browser shortcut bars များအတွက်စာရင်းလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ 960 pixel အတွင်းမှာရှိနေခြင်းအားဖြင့် ၁၀၂၄ pixel-width screen screen ပေါ်မှာဘယ်ဘက်မှညာညာ scrolling မရှိဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။
ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ။ ငါအသစ်အတွက် (ပိုမိုကျယ်ပြန်) layout ကိုအလုပ်လုပ်နေတယ် Indiana Insider ဘလော့ဂ် နှင့်ဤ post ကိုငါအတိအကျအရာဖြစ်တယ်!
13:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 35
အရမ်းထူးဆန်း Firefox တွင်သင့်ဆိုဒ်တွင် ၁၀၄၈ တွင် horizontal scrollbar ရှိပြီးသင် ၁၀၉၀ ရောက်သည်အထိသန့်ရှင်းသောအသွင်အပြင်မရှိပါ။
2:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 03 မှာ
မင်းကိုရပြီကတည်းက 1048px ဟုသတ်မှတ်သည်၊ သင့်ဆိုဒ်သည် ၁၀၂၄ မျက်နှာပြင်တွင်အလျားလိုက် scroll bar များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါ sidebar နှင့် content area ၏ 1024px အကျယ် (နှင့် padding) ကို skim လိုက်လျှင်ပိုကောင်းသည်ဟုထင်သည်။ ထို့ကြောင့် 100 × 728 နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါကဒီနေ့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။
အကယ်၍ analytics နံပါတ်များက၎င်းကိုထောက်ခံပါက၎င်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ သင်၏ဆောင်းပါးတွင်ထိုအချက်အလက်များကိုသင်မပေးသောကြောင့်သင်စာမျက်နှာဒီဇိုင်းသည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
24:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 51
ယခုတွင်ငါသည် 15 'မော်နီတာနှင့်အတူ 1024 × 768 resolution, ငါအလျားလိုက်ဘားကိုမြင်, ငါမုန်း၏။
28:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 36
လူတိုင်းကပြတင်းပေါက်တိုင်းကို full screen မှာမသုံးကြဘူး။
ငါမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို ၈၀% အကွာအဝေးမှာရှိနေတယ်၊ ​​အဲဒီမှာအလျားလိုက် scroll bar ရှိတယ်
ပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကဘာလဲ ... ဘာမှမကြည့်ရအောင်။
သင်၏ scroll bar သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိ။
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 49 တွင်
အကြောင်းအရာသည်စာမျက်နှာ @ heenan73 - disqus အတွင်းတွင်ဗဟိုပြုသည်၊ စာဖတ်သူမှသူတို့လိုအပ်သည့်အရာအတိအကျပေးသည်။ ငါစာဖတ်သူကိုဆုံးရှုံးနေရင်အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးကိုမြင်နိုင်ပြီးအလျားလိုက် scrollbar ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူတို့ရှာနေတဲ့စာဖတ်သူတွေမသေချာဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာအတွင်း၌ထူးခြားသောအရာတစ်ခုရှိသည်မှာ ၁၂၁၇px သို့ထုတ်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုရှာဖွေ။ ဖြေရှင်းရန်သွားမည်။ ဤ post ကိုအမှန်တကယ်ယခင်ဆောင်ပုဒ်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုယူဆောင်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်